निकुञ्जको जमिनमा बस्ती – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
निकुञ्जको जमिनमा बस्ती
२०७२ बैशाख ५, शनिबार ०१:३८ गते
भरतपुर । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन अतिक्रमणबाट जोगिन सकेको छैन । ठाउँठाउँमा निकुञ्जको जमिन अतिक्रमण भएको छ । निकुञ्जको एक हजार १६ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको निकुञ्जले निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अतिक्रमण गर्नेमा सुकुमबासीदेखि स्वामीहरुसम्म रहेका छन् । निकुञ्जले निकालेको आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० को वार्षिक प्रतिवेदनमा सो परिमाणको अतिक्रमित जमिनको विवरण उल्लेख भएको छ । समूहबाहेक व्यक्तिहरुले पनि ठाउँठाउँमा निकुञ्जको जमिन अतिक्रमण गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै माडी अयोध्यापुरी गाविसको वडा नं. ९ बाँदरझुलामा ४५१ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भरतपुरबाट ७५ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको बाँदरझुला भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । बाँदरझुला क्षेत्र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । यो ठाउँमा विसं २०४७ सालदेखि नै अतिक्रमण सुरू भएको हो । हाल सो क्षेत्रमा ४५६ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।
संकटकाल लागेका बेलामा विसं २०५८ सालमा त्यहाँको बस्ती उठाइएको थियो । तर पछि फेरि मान्छेहरु गएर बस्न थालेका हुन् । बाढी र पहिरोका कारण घरबारविहीन भएकाहरु बसेकाले राज्यले त्यहाँ थुप्रै स्थायी संरचनाहरु बनाएको छ । भव्य विद्यालय भवन छ । बिजुली पुगेको छैन, तर खानेपानीको प्रबन्ध भएको छ । निर्वाचनका बेला नेताहरु लालपूर्जा दिने वाचा गरेर बाँदरझुलाबाट मत माग्ने गर्छन् ।
त्यस्तै, मकवानपुरको मनहरी गाविस वडा नं. २ सुनाचुरीमा पनि निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गतको जमिन अतिक्रमण भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरो लागेर विस्थापित भएकाहरु ५९ सालमा सो ठाउँमा आएर बस्न लागेका हुन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुकुमबासी आएर बसेका छन्, तर निकुञ्जकै साँध सिमानाभित्र मुक्तिनाथ पिठाधीश स्वामी कमलनयनाचार्यले भव्य आश्रम र मन्दिर बनाएका छन् ।
त्यस्तै नवलपरासी गजग्राह पोष्ट क्षेत्रको १५ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको निकुञ्जले निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गजग्राहको अतिक्रमण हटाउन निकुञ्जको प्रयासले मात्रै नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आश्रम क्षेत्रलाई पहुँचवालाको संरक्षण रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
गजेन्द्र मोक्षधाम खडा गरेर कमलनयनाचार्यले भव्य मन्दिरहरु बनाउँदै आएका छन् । नवलपरासी नयाँ बेल्हानी गाविसको तमासपुरमा रहेको ठूलोपोखरी मध्यवर्ती सामुदायिक वनको १५ हेक्टर जमिन पनि अतिक्रमणमा परेको निकुञ्जको भनाइ छ । सो ठाउँमा विसं २०३६ सालदेखि अतिक्रमण सुरू भएको निकुञ्जले जनाएको छ ।
समूहगत नभएर नम्बरी जग्गाको आडमा रहेको निकुञ्ज र मध्यवर्ती सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ । यसरी पनि विभिन्न ठाउँमा गरेर ठूलो मात्रामा जमिन अतिक्रमण भएको निकुञ्जले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चितवनको अयोध्यापुरी, गर्दी, पटिहानी, मेघौली, गीतानगर, नवलपरासीको कुमारवर्ती, नारायणी, दिव्यपुरी, मुकुन्दपुर र पर्सा जिल्लाको ठोरी र निर्मलबस्ती गाविसहरुमा पनि निकुञ्जको क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यी ठाउँहरुमा ४२१ हेक्टर जमिन अतिक्रमित भएको छ ।
निकुञ्जको जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएको बाँदरझुला बस्ती ।
‘अतिक्रमित बस्तीमा सेवा नदेऊ’
भरतपुर । चितवन निकुञ्ज क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेको ठाउँमा कुनै पनि कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरिएको छ । चितवन निकुञ्ज प्रशासनले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा पत्राचार गरी अतिक्रमित बस्तीमा कुनै पनि विकास निर्माण र सरकारी सेवा सुविधा नलैजान अनुरोध गरेको छ ।
‘अतिक्रमित बस्तीमा सरकारी सुविधा नलैजान जिल्लामा सबै सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संस्था महासंघलाई हामीले पत्राचार गरेका छौँ’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी टीकाराम पौडेलले भने । झण्डै एक महिनाअघि पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए । सहयोग गर्ने निकाय कालोसूचीमा पर्ने सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।
‘वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीतिले अतिक्रमित क्षेत्रमा निर्माण र सहयोगलाई निस्तेज पार्ने निर्देशन दिएको छ । त्यसरी सहयोग गर्ने कालोसूचीमा पर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ’ पौडेलले भने ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजङ्ग कुँवर निकुञ्जको मह¤व चुरे संरक्षणसँग जोडिएको प्रसङ्ग ठाउँठाउँमा उठाउने गर्छन् । निकुञ्ज नभएका पूर्वीनेपालको चुरे क्षेत्र उजाड भएको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘यहाँको चुरे हराभरा हुनुको कारण निकुञ्ज नै हो ।’